Ceni:Hiantoka ny fangaraharahan’ny fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaCeni:Hiantoka ny fangaraharahan’ny fifidianana
18/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mampametra-panontaniana hatrany ny fomba atao ahazoana ny fahatokisan’ny rehetra eo amin’ny fitantanana ny zotram-pifidianana. Satria raha tsy azo ny fahatokisana, dia zava-poana ihany ny ezaka fanatsarana rehetra. Hatramin’izay tokoa mantsy dia voakiana hatrany ny vaomiera misahana ny fifidianana eto Madagasikara, hatramin’izay nisiany izay. Angamba noho ny tsy fahampian’ny mangarahara sy ny tsy fahampian’ny serasera no nahatonga izany. Raha jerena amin’ny ankapobeny, vokatry ny fandikana diso, ny tsy fahalalana na ny tsy fahafantarana ny zotram-pifidianana ihany koa no antony mety mahatonga izany. Ary eo amin’ny lafin’ny serasera sy mangarahara izay no tena mavesa-danja ka mahatonga ny Ceni hisokatra amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Antaninarenina, omaly, nandritra ny atrikasa fanamafisana ny fakan-kevitra entina hamolavolana ny paikan-tserasera, izay tohanan’ny Pnud ara-bola. “Mba hidinika sy haka hevitra, indrindra hiserasera mivantana amin’ny rehetra. Izany dia heverina fa hametraka tsikelikely ny fahatokisana. Etsy ankilany, voalohany izao no nahatafapetraka ny talen’ny serasera ny vaomieram-pifidianana. Izay manaporofo fa resy lahatra amin’ny maha-zava-dehibe ny serasera izany.”
Araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena hatrany dia miainga any amin’ny faritra Atsimo ny fampandrosoana an’i Madagasikara. “Mbola hamafisiko ary mbola hoteneniko foana fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara dia hiainga avy aty amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. ...Tohiny